android ဖုန်းအဘို့သန့်ရှင်းသောကက်ရှ်မာစတာ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » စင်ကြယ်သောကက်ရှ်မာစတာ-Phone ကို Cleaner နဲ့အာကာသ Booster
စင်ကြယ်သောကက်ရှ်မာစတာ-Phone ကို Cleaner နဲ့အာကာသ Booster APK ကို
စင်ကြယ်သောကက်ရှ်မာစတာ (ဖုန်း Cleaner နှင့် Space Booster), android ဖုန်းများအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးဖုန်းကိုသန့်စင်သည်။ စင်ကြယ်သောကက်ရှ်အရှငျဘုရား, junk file နဲ့ cache ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ android များအတွက် app ကိုမြှင့်တင်ရန်, သင့်ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။
🥇Itအသေးဆုံးpackage.🥇နှင့်အတူအကောင်းဆုံးသိုလှောင်မှုသန့်စင်နှင့်ဖုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကြယ်သောကက်ရှ်မာစတာရဲ့ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ:
✨အများကြီးသေးငယ်: သေးငယ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူဖုန်းဒီဇိုင်းပေါ့ပါးအထုပ် (3.0MB) ။
✨ junk ဖိုင်တွေကို Cleaner : သင်၏သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်, junk file ကို & cache ကိုဖယ်ရှားခြင်း။
✨whitelist: whitelist ထဲတွင်အတွက် Apps ကပင့်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေး, သန့်ရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
✨ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်း: အဆင်ပြေပြေနဲ့အစာရှောင်ခြင်း, သင့်ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန် One-ထိပုတ်ပါ။
အများစုမှာအခြားအသန့်ရှင်းတဲ့ app ကို 10M ထက်ပိုပါကသင်၏ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်အလွန်လေးလံသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပေါ့ပါးပိုမြန်မယ့် 3.0MB, ပါ!
🚀 junk ဖိုင်တွေကို Cleaner
ယာယီဖိုင်တွေ, သမိုင်းဖိုင်များနှင့်အေဒီဖိုင်တွေအပါအဝင်အချည်းနှီးဖိုင်တွေရှင်းလင်းဖို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကူညီပါ။ ဒါဟာ android အတွက်အကောင်းဆုံးဖုန်းကိုသန့်စင်ခြင်းနှင့်အာကာသအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအမှားအားဖြင့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များမဖျက်ပစ်၏အမှု၌ Whitelist အတွက် app ကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ privacy ကိုလုံခြုံရန်သန့်စင်ခြင်းနှင့်အာနိသင်တိုးမြှင့်ဟာ android ဘို့, ဒါပေမယ့်တစ် privacy ကိုကာကွယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုသူဖော်ရွေ, အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်မြှင့်တင်ရန်ရုံတစျခုကိုထိပုတ်ပါ။ စင်ကြယ်သောကက်ရှ်မာစတာ 100% အခမဲ့, လုံခြုံဒေါင်းလုပ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အသုံးပြုမှုကိုပါ!
သင့်ရဲ့ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်သစ်ကို apps များအဘို့မလုံလောက်ဘူးအမြဲဖြစ်သနည်း
သငျသညျသူတို့အားမေးခွန်းများကိုနေဖြင့်စိတ်ပူပန်နေကြသည်လျှင်, သန့်ရှင်းကက်ရှ်မာစတာ clean နှင့်သင့် device ကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ cache ကိုဖိုင်တွေ & Junk ဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ပါ, သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ရန်သမိုင်း browsing ကို clean up, သင့်ရဲ့ဖုန်းသိုလှောင်မှုနဲ့တက်နေရာလွတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပိုမြန်သင့်ရဲ့ device ကိုလုပ်ရမည်။
သင်တစ်ဦးသန့်စင်နဲ့ 'အသစ်' 'device ကိုအခါတိုင်းပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်!
phone.cleaner@springtech.info: သင်သည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါက, သင်အားဖြင့်ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ကြိုဆိုနေကြသည်။
ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူ Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းဖို့ optimized သန့်ရှင်းတဲ့ cache ကိုမာစတာ။
စင်ကြယ်သောကက်ရှ်မာစတာ-Phone ကို Cleaner နဲ့အာကာသ Booster